1-Matthijs de Ligt- Ajax
Xili suuqan waxa uu noqday xidiga loogu doonista badan yahay kabtan kooxda Ajax ee Matthijs de Ligt kaas oo sabab u noqday in koox kasta oo ka mid ah muruqyo waynta Yurub ay xiiso ka muujiyeen awoodiisii ciyaareed ee uu Ajax ku soo muujiyay isaga oo 19 sano jir ah.
Kooxaha Barcelona, PSG, Juventus, Liverpool, Man United, Man City, Real Madrid iyo Bayern Munich ayaan dhamaantood magacooda lagu soo qaaday saxiixa Matthijs de Ligt laakiin ilaa hadda waxa uu noqday xidig aan mustaqbalkiisa go’aan rasmi ah ka gaadhin.
Waraysigii ugu danbeeyay ee uu Matthijs de Ligt bixiyay oo uu siiyay wargayska Mundo Deportivo waxa uu ku cadeeyay in aanu wali go’aan rasmi ah ka gaadhin mustaqbalkiisa laakiin waxa uu qiray in uu jeclaan lahaa in uu ka garab ciyaaro saaxiibkiisii Ajax ee Frenkie de Jong iyo Lionel Messi.
Marka la qiimeeyo wararka ugu badan ee suuqa, kooxaha Barcelona iyo PSG ayaa ah labada kooxood ee inta ugu badan lala xidhiidhinayo saxiixa Matthijs de Ligt.
Laakiin wakiilka Matthijs de Ligt ee Mino Raiola oo ah nin aad u wada xaajood adag ayaa u muuqda mid si wayn uga faa’iidaysanaya tartanka xoogan ee ay kooxaha yurub ugu waa wayn ku doonayaan xidiga reer Holland waxaana loo arkaa in uu yahay sababta ugu wayn ee aan ilaa hadda kooxi ugu guulaysan De Ligt.
Kooxda Ajax ee soo saartay Matthijs de Ligt waxay ka faa’iidi doontaa lacag waali ah iyada oo ku doonaysa lacagtii abid ugu badnayd ee difaac lagu iibsaday wuxuuna hadda De Ligt qarka u saaran yahay in uu jabiyo rekoodhkii saaxiibkiisa Holland ee Van Dijk.
Liverpool ayaa Virgil Van Dijk ka soo bixisay 75 milyan gini Laakiin kooxda Ajax oo arkaysa dagaalka dhinac kasta kaga imanaya Matthijs de Ligt ayaa diyaar u ah in ay lacag ka badan 75 milyan gini ku iibiso 19 sano jirkan reer Holland ee Matthijs de Ligt.
Maalinta la gaadho in kooxi ay ku guulaysato saxiixa Matthijs de Ligt, waxa uu noqon doonaa mid aduunka kubbada cagta oo dhan laga dareemi doono isla makraana la filayo in heshiiskii ugu qaalisanaa ee da’yar lagu iibsado loo diwaan galin doono.
Heerka rabitaanka De Ligt laga gaadhay, Cristiano Ronaldo oo saamayntiisa la og yahay ayaa afka u kala qaaday 19 sano jirkan wuxuuna ka dalbaday in uu Juventus kula soo biiro kadib dhamaadkii finalkii UEFA Nations league dalabkaas oo uu De ligt ku tilmaamay arin uu amakaag ka qaaday.
Si kastaba ha ahaatee, taaageerayaasha kubbada cagta aduunka ayaa sugaya halka uu Matthijs de Ligt xili ciyaareedka cusub ka soo muuqan doono iyo kooxda nasiibka u yeelan doonta in ay adeegiisa ku guulaysato.
Liiska ciyaartoyda saamaynta badan suuqa ku samayn karaa kuma koobka 12 ka aan soo sheegnay balse waxaa jira xidigo badan oo saamayn yeelan kara oo ay ka mid yihiin Christian Eriksen, Isco, Ivan Rakitic, Marco Asensio, Mouro Icardi, Nebil Fekir iyo xidigo badan oo suuqa looga hadlayo.